TONIA MPAMPANOA LALANA : Tsy misy resaka politika ny fisamborana an’i Haja
Manao fanamby ny Tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina, Rajaonah Thierry Lauret fa tsy maintsy ataony izay hahatrarana ireo rehetra nandray anjara mivantana na an-kolaka tamin’ ny raharaha fakàna an-keriny an’i Armane Kamis. 9 décembre 2018
Fanambiny ny hamongotra hatramin’ny fakany ny tambajotran’ny fakana an-keriny ao Toamasina.
Misy anarana FSK (Force Spéciale Kidnapping) izany mihitsy moa ny tambajotran’ny mpanao fakaàa an-keriny eto Madagasikara. Fantatra ireo rehetra ireo nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina ny antoandron’ny zoma 7 desambra lasa teo. Valandresaka ho an’ny mpanao gazety niarahany tamin’ny Lietna-Kolonely Ranaivoarison Théodule kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana ny zandarimaria Atsinanana (groupement) sy Vahiny Yvi Sandro. Ity farany izay mitazona ny andraikitra mpisolo toerana voalohany ny Tonia mpampanoa lalàna ( premier substitut du Procureur ).
Nandritra izao fihaonana tamin’ny mpanao gazety izao, dia notsiahivina ireo zava-nitranga tamin’ny kidnapping nahazo an’ilay Karàna tompon’ny orinasa Transfy. Fakana an-keriny niseho ny alarobia 21 novambra tao Ampasimazava Toamasina. Ny alatsinainy 26 novambra kosa no votsotra noho ny hetsika manokana nataon’ny Fitsarana sy ny zandary. Nanambara ny Tonia mpampanoa lalàna Rajaonah Thierry Lauret fa raha avy tamin’ny fianakaviana dia firosoana tamin’ny fandoavam-bola no natao fa nisy kosa ny fepetra manokana noraisin’ny teo anivon’ny Fitsarana sy ny zandary ka nahatonga an’i Armane Kamis votsotra tsy nilana fandoavam-bola. Ankoatra ny famotsorana, dia mbola nisy tamin’ireo mpaka an-keriny koa no azo sambo-belona.
Hatreto, dia valo ny isan’ireo olona voasambotra tamin’iny raharaha iny, izay samy hatolotra ny Fampanoavana avokoa. Misy mpaneran’ ilay trano sy tompon-trano. Misy mpanome sakafo an’i Armane nandritra ny fihazonana azy. Ny atidohan’ilay fakàna an-keriny antsoina hoe Haja izay nambaran’ny Tonia mpampanoa lalàna fa voasambotra tany Antsirabe. I Haja izay fantatra fa efa voarohirohy tamin’ny fakàna an-keriny niseho tao Antsirabe ny taona 2016. Ilay nalaina an-keriny tao Antsirabe tamin’ny taona 2016 io izay fantatra fa mbola havan’i Armane Kamis ary anisany nandray anjara betsaka tamin’ny fisamborana an’i Haja tamin’izany fotoana izany i Armane Kamis.
Momba ireo bala 118 tratra tao amin’ilay tovolahy azo sambo-belona tao amin’ny trano nihazonana an’i Armane Kamis tao Mangarano II Toamasina, dia nanambara ny Lietna-Kolonely Ranaivoarison Théodule kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria Atsinanana fa nisy amin’ireo bala ireo no bala very tao amin’ny sekolin’ny zandary tao Ambositra.
Raha nanontanian’ny mpanao gazety momba ireo resaka voizin’ny gazety vitsivitsy milaza fa mpanohana ny kandidà laharana faha-13 io i Haja izay voalaza fa atidoha io, dia nanipika ny Tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina, Rajaonah Thierry Lauret fa tsy misy resaka politika velively ny fisamborana an’i Haja ary tsy misy idirana kandida filoham-pirenena velively.
Ny Tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina izay tsara marihina fa sady mpikambana ao anatin’ny Filankevitra Ambonin’ny mpitsara na ny CSM.
Nodimandry teo amin’ny faha-63 taonany i Jean Robert VERY OLOMANGA ANTSIRANANA (225) 12 juin 2019 Tratran’ny mpifaninana taminy nangala-bato i Nepatraiky Rakotomamonjy KANDIDA DEPIOTE IHOSY (223) 12 juin 2019 Miaramila miisa 34 naiditra am-ponja vonjimaika HETSIKA FAMPANDRIANA FAHALEMANA (197) 12 juin 2019 Saron’ny zandary tao an-tranony ireo poketran’olona voaendaka JIOLAHY RAINDAHINY TRATRA TENY ITAOSY (168) 11 juin 2019 Mandà ny endrika tsindry rehetra atao aminy ny Hcc VOKA-PIFIDIANANA OFISIALY (161) 11 juin 2019 Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora LEHILAHY TRATRA NANGARONA NY PAOSIN’ NY NAMANY (148) 13 juin 2019